RatnaSansar Shrestha, FCA रत्न संसार श्रेष्ठ: माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा सक्कली राष्ट्रवाद
तपाइको सक्कली राष्ट्रवाद पनि देखिएकै छ रत्नसंसार ज्यु । जब जब नेपालले ऋण काडेर भएपनि बिध्युत आयोजना बनाउन खोज्छ तब तब तपाईंजस्तै केही राष्ट्रवादिहरु सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई ऋणको भारमा सरकारले डुबाउने भो भनेर बिरोध गर्नुहुन्छ । तपाईं नै हैन सरकार आँफैले विश्व बैंक संग ऋण लिएर अरुण ३ बनाउदा घोर बिरोध गर्ने ? अस्ती सम्म पनि अरुण ३ किन बनाउनु हुँदैनथ्यो भनेर लेख लेख्दै हुनुहुन्थ्यो । यसको तपाईं सित रेडिमेड जवाफ छ : अरुण ३ नबनेर कालिगन्डकी, खिम्ती, भोटेकोसी बने, अरुण ३ अहिलेसम्म पनि बन्दैनथ्यो त्यसैले लोड सेडिंग हट्दैन थ्यो भनेर । किन बन्दैनथ्यो, किन हुँदैन ? भन्दा किन हुनुपर्छ? भन्ने तिर आन्दोलन गरे त हुन्थ्यो नि । जुन जुन योजनामा नेपाल सरकाले आँफै लगानी गर्न सक्दैन तत तत योजनामा " यो योजना त संसारकै सबैभन्दा आकर्षक योजना हो यो सरकाले आँफै बनाउनु पर्छ " भनेर बिरोध गर्नुहुन्छ । आफु चाँही ल्याप्टप बोक्दै पण्डित बन्दै हिंड्ने अनी जनतालाई अध्यारोमै बस्न बाध्य बनाउने तपाईं जस्ता राष्ट्रवादीहरुको दुकान चलुन्जेल सम्म जलश्रोत को बिकास हुनसक्ने छाट् देखिदैन ।